News – Page5– RISE
၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်စာရင်း
အသေးစိတ်အချက်အလက်အား ဤနေရာတွင် www.myanmarexam.org နှိပ်ကြည့်ပါ။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာပေးပွဲအောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရမှတ်အများဆုံးရရှိသူ(၁၀)ဦးစာရင်း
RISE မှ ဒေသတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲသူ TEES များ နှင့်တွေ့ ဆုံ
၂၀၁၈၊ မေလ ၂၁ မှ ၂၆ ရက်အထိ RISE(Rural Indigenous Sustainable Education) အဖွဲ့ သည် လာမည့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ TEES(Teacher Establishing Education Service) ပညာသင်နှစ် အတွက် ထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်လျှက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ချို့ နှင့်သွားရောက်တွေ့ ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ ဆုံမှုကာလအတွင်း RISE အဖွဲ့ မှ Naga TEES ဆရာ၊မ ၂၂ ဦးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆွမ်မရာမြို့ ၌၎င်း၊ Ta’ang TEES ဆရာ၊မ၂၈ ဦးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့ ၌၎င်း တွေ့ ဆုံခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း RISE အဖွဲ့ အစည်းတာဝန်ရှိသူများမှ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းကန့် သတ်နယ်မြေဒေသများ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဝေးလံခေါင်ဖျားလူမျိုးစုဒေသတွင် ကျောင်းသူ၊သားများကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်အ တွက် စာသင်ကြားပေးမည့် TEES ဆရာ၊မမှ ဒေသခံ ဆရာ၊မများအား စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့် ၎င်းတို့မှမည်မျှအရေးပါကြောင်းကို နှိုးဆော်အားပေးမှုများပြု လုပ်ခဲ့သည်။
တအာန်းကျောင်းသားနှင့်လူငယ်သမဂ္ဂမှ ဆရာမလွေးဆိုင်နွန်က RISEမှတာဝန်ရှိသူများအားရင်ဖွင့်သံ စကား ပြောကြားရာတွင် “ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသမှာဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းကို ဒီတစ်ခေါက် ပြန်သွားရမှာ ကျွန်မတကယ့်ကို စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ ရပ်ရွာထဲမှာဆို TEES ဆရာမ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သာမက ခေါင်းဆောင်တစ် ယောက်လို ဒါမှမဟုတ်ရင်သူနာပြုတစ်ယောက်လိုပါ သူတို့ တစ်တွေအားကိုးနေကြတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ် တိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေက ကျွန်မတို့ ဆီ အကြံဥာဏ်လာတောင်းလေ့ရှိတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမအလုပ်ကို ကျွန်မကျေနပ်တယ်။”
RISE အဖွဲ အစည်း၏မိတ်ဖွဲ့ များမှာ ကရင်၊ ရှမ်း၊ လားဟူ၊ တအာန်း၊ ကချင်၊ ကယန်း၊ ချင်း၊ ပအို့ ဝ်၊ နာဂနှင့် ဇိုမီးမှ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်း ၁၀ ဖွဲ့ ဖြင့် လတ်တစ်လောပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ TEES ၏ အဓိကရည်ရွယ် ချက်မှာ TEESဒေသခံဆရာ၊မများ ပညာရေး အခွင့်အလမ်းမရှိသည့်နေရာများ၌ ကျောင်းများ ထူထောင်ရန် နှင့် ကလေးများပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဆရာမလွေးဆိုင်နွန်မှဆက်ပြီး“ကျမထင်ထားတာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက် ဒီအလုပ်ကိုပြန်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကျောင်းသူ၊သားတွေကို ပြန်လည်မြင်ယောင်ရင်းနဲ့ကျွန်မအလိုလိုစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။” “ကျွန်မစာပြန်သင်မယ်။”
ယခင်၂၀၁၁ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ခုနှစ်အထိဖွဲ့ စည်းခဲ့သည့် EBCS(Eastern Burma Community Schooling Project) အဖွဲ့ အစည်းသည် ယခုလက်ရှိ RISE အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သို့ အမည်ပြောင်းကာ တိုင်းရင်း၊ ဒေသခံဆရာ၊မများ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းမရှိမည့် ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသအတွင်း ပညာရေးအထောက် အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
RISE၏ ယခင်၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ် စာရင်းအရ ကျောင်းပေါင်း (၁၄၅)ကျောင်း ၊ ဆရာ၊မပေါင်း (၂၁၈)ဦး နှင့် ကျောင်းသူ၊သားပေါင်း(၉၁၆၄)ရှိကြောင်း ၎င်း၏ပညာသင်နှစ်စာရင်းအရသိရှိရသည်။
RISE Encountering with TEES,aLocal Change Makers
On the 21st to 25th May, 2018, RISE (Rural Indigenous Sustainable Education) team visited some partners to be able to support TEES (Teacher Establishing Education Service) program for 2018-19 academic year. In these visits, RISE team met with 28 of Ta’ang TEES in Lashio, Shan North and 22 Naga TEES in Somra, Sagaing Region.
During the trip, RISE team main purpose was to support the TEES who were ready to disperse to respective communities and to motivate the importance role local teachers as change makers in limited education opportunities in most ethnic remote areas.
Lway Seng Non from TSYU (Ta’ang Student and Youth Union) expressed her feeling that, “I am very exciting to go again to the community school. AsaTEES teacher, I also have to act likealeader and/oranurse. Whenever the problem arises in the community, the leaders or the villagers come to seek an advise from me. Anyway, I enjoy my work.”
Within the RISE umbrella organization, there are 10 implementing partners, including Karen, Shan, Lahu, Ta’ang, Kachin, Kayan, Pa Oh, Naga, Zomi and Chin. The TEES program is aimed to encourage local community teachers to establish schools and schooling opportunities where there is no other educational access.
Lway Seng Non continued, “ I thought, I won’t go back to the community after my service last year but when I recall my memory with my students, it’s touched me to change my mind.” “I must go”, she added.
The RISE, formally derived fromaproject called EBCS (Eastern Burma Community Schooling Project), was initiated in 2011 and officially formed in 2016 with the aim to promote ethnic/indigenous teachers where there is no education opportunity in remote areas. In the RISE school statistic, there are (145) schools, (218) teachers and (9164) students in 2017-18 academic year.
RISE Launches Website!
We are happy to launch our RISE (Rural Indigenous Sustainable Education) website! We look forward t your suggestions and feeback.